ကလေးကမွေးပြီးပြီးလေ ဘာလို့ဗိုက်က ဆက်ကြီးနေရတာလဲ? | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Apr 12, 2020
တချို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့မှာ ကလေးမွေးပြီးပြီပေမယ့် ဗိုက်က ဆက်ဖောင်းနေတာ၊ ဗိုက်စည်းတွေစည်းနေပေမယ့်လည်း ဗိုက်က ပြန်မချပ်သေးတာကိုကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒါကဘာ့ကြောင့် ဖြစ်တာလဲဆိုတာကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာပါ။ အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့အခါ အတွင်းက ကလေးလေးကြီးထွားလာတာနှင့်အတူ ဝမ်းဗိုက်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကလည်း လိုက်ပြီး ဆန့်ထွက်လာရပါတယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဆန့်ထွက်လာပြီးတဲ့အခါ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကွဲပြီး ဖောင်းလာတာကို ဆေးပညာအခေါ်အားဖြင့် Diastasis recti ဒါမှမဟုတ် ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကျွံခြင်း လို့ခေါ်ပါတယ်။ ၆၀ရာခိုင်နှုန်းသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမှာ အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ မတွေ့ရတတ်ပါဘူး။ ကလေးမီးဖွားပြီးမှ တွေ့ရတတ်တာပါ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာသာမက မွေးကင်းစကလေးတွေ နှင့် အလေးအမများတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အများအားဖြင့် ခါးကုန်းလိုက် ကွလိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာ ဝမ်းဗိုက်တစ်ဝိုက်မှာ အဖုအထစ်လိုလို ဖောင်းလာတာ နဲ့လာတတ်ပါတယ်။ နောက်တွေ့ရတတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ ခါးနာတာ၊ ကိုယ်နေဟန်ထားမမှန်တာ၊ ဝမ်းချုပ်တာ၊ လေပွတာ မျိုးနဲ့လာတတ်ပါတယ်။ အများစုက အစာအိမ်ရောင်တာနဲ့မှားတတ်တာကိုတွေ့ ရပါတယ်။
ကလေးမွေးပြီး ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကျွံလာမှန်း ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ?
ကလေးမီးဖွားပြီးရင်တော့ ဝမ်းဗိုက်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲဖောင်းနေတာ၊ ဖုနေတာမျိုး သတိထားမိလာကြပါတယ်။
ကလေး မီးဖွားပြီး ၃လလောက်ကြာတဲ့အထိ ဗိုက်ကလိုက်မချပ်လာဘူးဆိုရင်တော့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကျွံလာပြီလားဆိုတာ သံသယဝင်ရတော့မှာပါ။ မပေါ့သင့်ပါဘူး။ အိပ်ရာပေါ်ပတ်လတ်အနေအထားနဲ့လှဲပြီး ဒူးခေါင်းထောင်ထားကာ ခြေရင်းကို ခေါင်းထောင်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဝမ်းဗိုက်ကျွံနေသလား သိနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ မိမိဝမ်းဗိုက်ကို စမ်းကြည့်လို့လက်၂လုံးခန့် ဒေါင်လိုက်အမြောင်းလေး ဖြစ်လာမယ်ဆို ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကျွံခြင်းဖြစ်ဖို့သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်မှာ အဲ့လိုထူးခြားတာတွေ့ရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်ထံမှာ သွားရောက်ပြသပြီး စစ်ဆေးမှုခံယူပါ။
ဝမ်းဗိုက်အတွင်းထဲမှာ ဖိအားများလာတာဟာ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကျွံခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်း တစ်ခုပါ။ ဟိုးအရင်လေ့လာချက်တွေအရ ကိုယ်အလေးချိန်များတဲ့သူတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကျွံခြင်း ပိုဖြစ်တတ်တယ်လို့ပြောကြပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းသုတေသနေတွေ့ရှိချက်တွေ အရ ပိန်ပိန်၀၀ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုတာနဲ့ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကျွံခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ ပေါင်မပြည့် လမစေ့ဘဲမွေးလာတဲ့ကလေးငယ်အများစုမှာလည်း ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကျွံတာဖြစ်တတ်တယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
အများစုကတော့ ဗိုက်စည်းသေချာစည်းမယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လေ့ကျင့်ခန်းသေချာပြန်လုပ်မယ်ဆို ခွဲစိတ်ဖို့မလိုတတ်ဘဲနဲ့ နဂိုအတိုင်း ပြန်ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။
မွေးပြီး ၆လအထိ အလေးအပင်မတာ ရှောင်မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားမှန်မှန်နေမယ်။ ထိုင်ရင် နောက်ကျောမှာ ခေါင်းအုံးခုထိုင်တာမျိုး နဲ့ထိုင်ရပါမယ်။
ရိုးရိုးပဲမွေးမွေး ခွဲပြီးပဲမွေးမွေး ကိုယ်ဝန်ဆောင် လရင့်လာတာနဲ့အမျှ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကျွ ံတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဝမ်းချုပ်တာ၊ ချောင်းဆိုးတာကြာလာရင်လည်း ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကျွံတာကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်ကိုအားပြုရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးတွေကလည်း ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကျွံတာကို ပိုဆိုးစေလို့ကိုယ်ဝန်တောင် တွေ လုပ်ရမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုပဲရွေးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သာကျွံလို့ဖြစ်လာတဲ့အမြောင်းဟာ လက်၂လုံးအကျယ်ထက်ကော်လာတယ်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ပြပြီး ကုသမှုခံယူရတာမျိုးလုပ်ရတတ်ပါတယ်။
မေဇင်ဆီကို လူမျိုးဘာသာမရွေးဘာလို့ သုံးနိုင်တာလဲ
ကလေးများတွင် အဖြစ်များသော ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများအကြောင်း